Mareykanka: Waxaan haynaa cadeymo ah in Covid-19 lagu sameeyay sheybaar ku yaalla shiinaha – Radio Damal
Mareykanka: Waxaan haynaa cadeymo ah in Covid-19 lagu sameeyay sheybaar ku yaalla shiinaha
Xog-hayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay iney jiraan cadeymo waaweyn oo muujinaya in coronavirus uu ka soo unkamay sheebaar ku yaal magaalada Wuhan ee Shiinaha, oo ah halkii uu markii horaba ka soo bilowday xanuunkan saf-marka ah.
Mike Pompeo ayaanan sheegin cadeyn taagereysa warbixintiisa balse waxa uu sidoo kale sheegay inuusan hayn sabab uu shaki u galiyo warbixinta waaxda sirdoonka Mareykanka ee tibaaxeysay in fayraskan uusan ahayn mid uu bini’aadan gacantiisa ku sameeyay.
Seynisyahanno badan ayaa aaminsan in coronavirus uu ka soo unkamay xaywaanka duurjoogta ahi ee lagu kala iibsado seyladaha Shiinaha.
Shiinaha ayaa horay gaashaanka ugu daruuray wararka sheegayay in mid ka mid ah sheybaaradiisa uu ka soo fakaday fayraskan dunida halakeeyay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay u sheegay in coronavirus lagu sameeyay shaybaar ku yaal waddanka Shiinaha.
Hase yeshee xafiiska agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa sheegay in ay weli baarayaan sida uu fayraskan ku bilowday balse ay ogaadeen in Covid-19 “uusan ahayn wax uu qof sameeyay ama unugyadiisa la farsameeyay”.
Tan iyo markii uu cudurkaasi ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore, ayaa coronavirus waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay 3.5 milyan oo qof oo ku nool daafaha dunida halka in ka badan 247,000 oo qofna ay u dhinteen.
Muxuu Madaxweyne Trump sheegay?
Mar uu Khamiistii ka hadlayay Aqalka Cad, ayaa weriye goobta ku sugnaa Mr Trump waxa uu waydiiyay: “Ma waxaad aragtay waqtigan wax kalsooni sare ku siinaya in Mac-hadka Wuhan ee arrimaha Virology-ga uu ahaa midka uu asal ahaan ka soo jeedo fayraskan?”
“Haa, waan hayaa. Haa, waan hayaa,” ayuu yiri madaxweynaha, isagoon wax faafaahin ah bixin.
“Waxayna ila tahay in Hay’adda Caafimaadka Adduunka ay cayb isu soo jiidday sababtoo ah waxa ay hay’addu u dhaqmaysay sida iyadoo ah wakaalad ka tirsan Shiinaha.”
Wargeysa New York Times ayaa Khamiistii waxa uu ku warramay in saraakiil sarsare oo ka tirsan Aqalka Cad ay sirdoonka Mareykanka waydiisteen inuu baaro haddii fayraska uu ka yimid shaybaar daraasadaha lagu sameeyo oo ku yaal magaalada Wuhan.
Hay’adaha sirdoonka ayaa sidoo kale waxaa loo diray inay go’aan ka soo gaaraan haddii Shiinaha iyo Hay’adda Caafimaadka Adduunka ay xilli hore hayeen xog ku saabsan fayraska, saraakiil aanan magacooda la sheegin ayaa Arbacadii sidaasi u sheegay warbaahinta NBC News.